Uhlu Lwezingcingo Zebhizinisi LaseBrazil | Uhlu lwezinombolo zeselula | Database lakamuva Lokuposa
Uhlu lwebhizinisi laseBrazil iBrazil
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwebhizinisi laseBrazil iBrazil
Izinombolo Zefoni YaseBrazil
Uhlu lwefoni yebhizinisi laseBrazil lufake lapha inombolo yefoni / yeselula eyi-1 million. Sinikezela ngohlu lwezinombolo zebhizinisi olusha olwenziwe kabusha nolusebenza. Inikezela ngohlu lwefoni yebhizinisi laseBrazil uhlelo lokuhlola i-inthanethi lapho ungakhangisa futhi uthole izinombolo zocingo kanye negama labantu, ikheli kanye nesihloko somsebenzi.
Ukufinyelela abantu abaningi usohambeni kwenziwe lula kusukela kwaqala ama-sms ngobuningi eBrazil, manje usungafinyelela kunoma ngubani onamafoni nezinkampani nezinhlangano ezihola kuwo ukukhangisa izimpahla zakho, izinsiza kanye nemicimbi. Ungasebenzisa le database yokuthengisa uhlelo lokusebenza lwe-whats kanye nokumaketha okuthengisayo, ukuthumela imiyalezo nge-SMS ngobuningi, i-Database yezinombolo zeselula isetshenziselwa ngokuphelele ukukhangisa nokumaketha.
Thenga uhlu lwezinombolo zefoni yebhizinisi laseBrazil
Izindlela Zokuxhumana Zebhizinisi LaseBrazil
Uhlu lwefoni yebhizinisi laseBrazil luhlu oluthembekile lwezinhlu zocingo ezivela eBrazil. Lolu hlu lwezinombolo zocingo lwebhizinisi lunesethi eqondile yabemukeli engafakwa kuphela kulolo hlu lwebhizinisi olusebenzayo futhi oluqinisekisiwe eBrazil olufakwe ohlwini, indlela efanelekile futhi ebonakalayo yokuthola uhlu lwefoni lwebhizinisi elifanele.
Njengoba unikezwe iqiniso lokuthi ibhizinisi lakho lidinga inombolo entsha yocingo yendawo ngayinye eqondisiwe. Lokhu kwenziwa ngokufanele futhi kucwaningwe ukuba khona kwethu siqu ezimakethe ezithile eziqondiwe futhi kwenza inkampani yakho ifinyeleleke kubantu noma izinkampani ezivela eBrazil izwe. Ngakho-ke, lapho uthenga okuningana ngentengo engabizi, kokukhona izinzuzo zebhizinisi lakho.
Lolu hlu lwebhizinisi laseBrazil luqukethe amarekhodi ayi-1 miliyoni afakwe kuhlu lwangempela lwebhizinisi afinyelela ku- $ 1,200, ongawuthenga ngemali ekhokhwa ngesikhathi esithile kanye nesoftware elandelwayo engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV futhi ibihamba kalula kudeskithophu yakho .
Database Lokugcina Lokuposa linikeza okubalulekile ekunikezeni efanele, ukufinyelela ngokushesha, amabhizinisi amaningi ongafinyelela kuwo ukuze wena noma inkampani yakho imake kalula. Ekugcineni, lokhu kungenza insizakalo yamakhasimende ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka, ukwenza inkampani yakho iqhubeke ikhula ngempumelelo yebhizinisi lakho.
I-Brazil Business Ucingo Izinombolo Umbuzo & Impendulo